45 Zvanzi naJehovha kumuzodziwa+ wake, kuna Koreshi, wandakabata ruoko rwake rworudyi,+ kuti ndikunde marudzi pamberi pake,+ kuti ndisunungure hudyu dzemadzimambo; kuti ndimuvhurire masuo ane madhoo maviri, zvokuti kunyange magedhi haazovharwi: 2 “Ini ndichakutungamirira,+ uye ndichaenzanisa nzvimbo dzisina kuenzana dzenyika.+ Ndichatyora-tyora masuo emhangura, uye ndichagura mizariro yesimbi.+ 3 Ndichakupa pfuma+ iri murima nepfuma yakavanzwa iri munzvimbo dzakavandika, kuti uzive kuti ndini Jehovha, Iye ari kukushevedza nezita rako,+ Mwari waIsraeri. 4 Nokuda kwomushumiri wangu Jakobho uye nokuda kwaIsraeri wandakasarudza,+ ndakakushevedza nezita rako; ndakakutumidza zita rinokudzwa, kunyange wakanga usingandizivi.+ 5 Ndini Jehovha, uye hakuna mumwezve.+ Kunze kwangu hakuna mumwe Mwari.+ Ndichanyatsokusunga, kunyange usina kundiziva, 6 kuti vanhu vazive kubvira kumabvazuva uye kubvira kwarinovirira kuti hakuna mumwe kunze kwangu.+ Ndini Jehovha, uye hakuna mumwezve.+ 7 Ini, Jehovha, ndiri kuita zvinhu zvose izvi,+ kuumba chiedza+ nokusika rima,+ kuita rugare+ nokusika dambudziko.+ 8 “Haiwa imi matenga, donhedzai zvichibva kumusoro;+ uye matenga ane makore ngaapfunhe kururama.+ Nyika ngaivhurike, ngaibereke ruponeso, uye ngaimerese+ kururama panguva imwe chete. Ini, Jehovha, ndakazvisika.”+ 9 Ane nhamo anorwa noMuumbi wake,+ sezvinoita chaenga chomudziyo wevhu nezvimwe zvaenga zvomudziyo wevhu zvepasi! Ivhu+ ringati here kune muumbi waro: “Unoitei?” Chawakagadzira chingati here: “Haana maoko”? 10 Ane nhamo ari kuti kuna baba: “Munoberekei?” uye kumudzimai: “Munorwadziwa nokusunungukei?”+ 11 Zvanzi naJehovha, Mutsvene waIsraeri+ noMuumbi+ wake: “Ndibvunzei nezvezvinhu zviri kuuya+ pamusoro pevanakomana vangu;+ uye mundirayire pamusoro pebasa+ remaoko angu. 12 Ndini ndakaita nyika+ uye ndakasika munhu ari pairi.+ Ini—maoko angu akatatamura matenga,+ uye ndakarayira uto rawo rose.”+ 13 “Ndini ndakamutsa mumwe munhu mukururama,+ uye ndichaenzanisa nzira dzake dzose.+ Ndiye achavaka guta rangu,+ uye achasunungura vanhu vangu vakatapwa,+ kwete nokuda kwomutengo+ kana nokuda kwepfumbamuromo,” Jehovha wemauto adaro. 14 Zvanzi naJehovha: “Vashandi vasingabhadharwi veIjipiti+ nevatengesi veItiopiya nevaSebhiya,+ varume varefu,+ ivo vachauya kwauri, uye vachava vako.+ Vachafamba vari shure kwako; vachauya vakasungwa nezvisungo zvomumakumbo,+ uye vachakukotamira.+ Vachanyengetera kwauri, vachiti, ‘Chokwadi Mwari anewe,+ uye hakuna mumwezve; hakuna mumwe Mwari.’”+ 15 Chokwadi imi muri Mwari anoramba akavanda,+ Mwari waIsraeri, Muponesi.+ 16 Vachanyara uye vachaninipiswa, vose zvavo. Vagadziri vezvidhori vachafamba pamwe chete vachinyara.+ 17 Asi Israeri achaponeswa muna Jehovha+ noruponeso rusingagumi.+ Imi hamuzonyari,+ uyewo hamuzoninipiswi+ kusvikira kunguva dzisingagumi dzokusingaperi. 18 Nokuti zvanzi naJehovha, Musiki wematenga,+ Iye Mwari wechokwadi,+ Muumbi wenyika noMuiti wayo,+ Iye akaisimbisa kwazvo,+ asina kungoisikira pasina, akaiumba kuti igarwe:+ “Ndini Jehovha, hakuna mumwezve.+ 19 Handina kutaura ndiri munzvimbo yakavandika,+ munzvimbo yenyika ine rima; uyewo handina kutaura nevana vaJakobho kuti, ‘Nditsvakei pasina.’+ Ndini Jehovha, anotaura zvakarurama, anozivisa zvakarurama.+ 20 “Unganai muuye.+ Swederai pedyo pamwe chete, imi vapukunyuki vanobva kumarudzi.+ Vaya vari kutakura danda romufananidzo wavo wakavezwa havana kuziva, nevaya vari kunyengetera kuna mwari asingagoni kuponesa.+ 21 Taurai mashoko enyu nenyaya yenyu.+ Chokwadi, ngavarangane vakabatana. Ndiani akaita kuti izvi zvinzwiwe kubvira kare kare?+ Ndiani akazvitaura kubvira panguva iyoyo chaiyo?+ Handisi ini here, Jehovha, asina mumwe Mwari akafanana naye;+ Mwari akarurama uye Muponesi,+ asina mumwe akafanana neni?+ 22 “Tendeukirai kwandiri muponeswe,+ imi mose muri kumigumo yenyika; nokuti ndini Mwari, hakuna mumwezve.+ 23 Ndakapika neni pachangu+—shoko racho rakabuda mumuromo mangu nokururama,+ zvokuti harizodzoki+—kuti mabvi ose achandipfugamira,+ rurimi rwose ruchapika,+ 24 ruchiti, ‘Chokwadi kururama kwakazara nesimba+ zviri muna Jehovha. Vose vanomutsamwira vachananga kwaari vonyadziswa.+ 25 Vana+ vose vaIsraeri vachava vakarurama+ muna Jehovha uye vachazvirumbidza.’”+